Faayilii - Hiriira Mormii Mi’eessoo, Oromiyaa
Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa, Godinaalee fi aanaalee adda addaa keessatti mormiin baatiilee saglan dabaraniif geggeeffamaa ture, torbanneen lamaan dabran kana keessa deebi’ee babal’achuu isaa fi ijoolleen umuriin isaanii 13 faa dabalee – hiriirtonni heduun rasaasaan ajjeesamuu isaanii – Paartiin mormituu, Kongiresiin Federaalawa Oromoo fi jiraattonni bakkawwan mormiin itti geggeessamee Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran.
Kan ani Kaleessa Finfinneetti bilbilee haasofsiie - Itti-aanaa Dura-taa’aan Koongiresa Federaalawa Oromoo – Obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti, mormiin Oromoo baatiilee sagaliif geggeessamee ture amma deebi’ee babal’atee – Godinaalee akka Hararghee Bahaa fi Lixaa, Arsii Lixaa, Shawaa Lixaa, Wallgga Lixaa, Qellem Wallaggaa fi Horro-Guduruu Wallaggaa keessatti itti fufee jira – jedhan. Mormii kana dura-dhaabbachuuf tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin namoonni du’uu ka gabaasaa argatan ta’uu illee dubbatanii jiran.
Bakkawwan Obbo Mulaatuun maqaa dhawan keessaa tokko – Godinaa Harargee Lixaa, aanaa Odaa Bultum magaalaa Baddeessaa ti. Waa’ee mormii magaalattii keessatti geggeessamee fi tarkaanfii humnoonni mootummaan fudhatan, jedhamuu, jiraattonnii fi poolisiin magaalattii ibsanii jiran.